စိတ်ကူးပျော်ရာ: ထူးချွန်အောင်မြင်သူများတွင်မတွေ.ရသော အားနည်းချက်များ
- အလုပ်ကိစ္စအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို စဉ်းစားဆင်ခြင်တာတို.၊ လေ့လာသုံးသပ်တာတို.မလုပ်ဘဲ နားမလည်ပါးမလည်နဲ. လုပ်တတ်တဲ့အပြုအမူမျိုးကိုပြောတာပါ။
- အလုပ်တွေအရမ်းများလာပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြုံလာရတာမျိုးကတော့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ တခါတရံမှာဆိုရင်ထင်မထားတဲ့ အကြောင်းအရာကိစ္စတွေ ဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေလည်းကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ကပါ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာနဲ. ဘာလုပ်လို. ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ကြောက်လန်.နေရင်တော့ သေချာပါတယ် အမှားတွေတောက်လျောက်ကြုံတော့မှာပါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး ဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းနိုင်မှအဆင်ပြေနိုင်မှာပေါ့။
- ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်ထင်ရာမြင်ရာ ကိုယ်သိထားမှတ်ထားတာကိုချည်းပဲစံထားပြီး အယူသည်းလုပ်ကိုင်တာမျိုး ဘယ်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်မှမလုပ်ပါဘူး။
- အလုပ်ကြိုးစားမှအောင်မြင်မှုရနိုင်မယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။ ပျင်းတိပျင်းရွဲ.နေတတ်တဲ့သူကတော့ ဘယ်တော့မှအောင်မြင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
- Steve Jobs ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ အလုပ်ကိုအစလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေမှာတောင် ကိုယ့်အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အလုပ်အပေါ် ခင်တွယ်တဲ့စိတ်ပြင်းပြတဲ့သူမျိုးတွေကသာ အောင်မြင်လာနိုင်တာပါတဲ့။ အဲ့စကားကိုအခြေခံပြီးမှ ကိုယ့်အလုပ်အပေါ်စိတ်နှစ်ပြီး တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိဘဲ စိတ်အပြောင်းအလဲလွယ်ပြီး ဟိုအလုပ်ပြောင်းလုပ်ချင် ဒီအလုပ်လည်းပြောင်းလုပ်ချင် ဖြစ်နေတာကတော့ လုံးဝမကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ.အပြုအမူမျိုးပါပဲ။
- မနာလိုတာ၊ ရှက်ရွံ.တာ၊ လိုချင်စိတ်များတာ၊ ခံပြင်းတာ အစရှိသဖြင့်ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြပြီး ကိုယ်နဲ.အလုပ်အတူတူလုပ်နေသူတွေကိုပါ ကူးစက်ခံစားရအောင်လုပ်တာတို.၊ ကိုယ့်ခံစားချက်ကြောင့် တခြားသူတွေကိုဒေါသနဲ.ဆက်ဆံလိုက်တာမျိုးတို.က သင့်အလုပ်ရော သင့်လုပ်ငန်းဖော်တွေကိုရောဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
- ကမ္ဘာကြီးကသင်တစ်ယောက်တည်းအတွက်လည်ပတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်အကိုင်လုပ်ငန်းဆိုတာကလည်း သင်တော်လွန်းတိုင်း အဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်လွန်းတယ်လို. တကိုယ်ကောင်းဆန် အထင်ကြီးနေတာက သင့်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်သိဖို.ကသင်အလုပ်လုပ်နေရင် သင့်အလုပ်ရှင်ဆိုတာရှိနိုင်သလို၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ. သင်ဆက်ဆံရမယ့် Customer တွေလည်း ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။
၈။ အတိတ်ကိုအစွဲထားလွန်းခြင်း နှင့် အနာဂါတ်ကိုကြိုအတွေးလွန်ခြင်း
- အတိတ်ကအတွေ.အကြုံတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်အသုံးချနိုင်ပေမယ့် တသမတ်တည်းအသေမှတ်မထားသင့်ပါဘူး။ အဲ့လိုပဲအနာဂါတ်ကို ကြိုတင်စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားတာကောင်းပေမယ့် လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကိုအဓိကထားစဉ်းစားလုပ်ကိုင်ရမှာပါ။ ပစ္စုပ္ပန်မှာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှ အနာဂါတ်အတွက်အောင်မြင်မှုက သေချာနိုင်မှာပါ။
- "အဆင်ပြေရင်ပြီးရော" "ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါတယ်" ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကို တကယ်အောင်မြင်ထူးချွန်တဲ့သူတွေ ဘယ်တော့မှ မပြောပါဘူး။
- ဘယ်အရာကိုမှလွယ်လွယ်ကူကူမခံစားပါနဲ.။ ကိစ္စသေးသေးလေးကိုထိခိုက်ခံစားလွယ်နေရင် သင်တကယ့်လုပ်ငန်းလောကမှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေချောမွေ.နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့်ပဲ တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဟာ ဟာသဥာဏ်နဲ. အရာရာကိုဖြေရှင်းတတ်ကြတာပါ။
Wilson Chan (YK)
Credit : Entrepreneur
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/29/2015 01:16:00 AM
ပုံတော် နှင့် ဂုဏ်တော်
နေလောင်ကာ ခရင်မ်ရွေးချယ်နည်း လမ်းညွှန်
နှစ်ငါးဆယ်ကျော်က စေတီဟောင်းတစ်ဆူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်...
ဘီလျံနာသူဋ္ဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာဘွဲ့တွေရဖို့ လိုသလဲ...
တတိယအကြိမ်မြောက် Miss Farmer ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
လေယာဉ်မှူးခန်းထဲ အနည်းဆုံး ၂ ဦး ထားရှိရေးဥပဒေ အရေ...
ခေါင်း ဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်လဲ
ကလေးတို့ရဲ့ နွေအားလပ်ရက်တွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်စေသင...
မိသားစုကိုထောက်ပံ့ရန် နှစ် ၄၀ ကျော်ကြာ အမျိုးသားတစ...
ကျွန်ုပ်နှင့် ပင်လယ်ပြာ. . .
ပျော်စရာကောင်းပြီး အလုပ်တွင်ကျယ်တဲ့ အလုပ်ခွင်တစ်ခု...
ဆံပင်မညှပ်မီ သိထားရမယ့် အချက် (၆) ချက်
၈ နာရီထက် ပိုအိပ်ခြင်းဟာ အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်ေ...
စေ့စပ်ပြီးသား လူတွေရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ အမူအကျင...
လူသားတွေလို နမ်းရှုံ့ချစ်ကြိုးသွယ်နေတာ မြင်ခဲ့ရတဲ့ ...
ခမ်းနားကြီးကျယ်အောင် ချဲ့လာတဲ့ ခေတ်မင်္ဂလာဆောင်
Hot Pot ချက်နည်း
ပုဇွန်ဆုပ်၊ ငုံးဥ ချိုချဉ်ကြော်
ဘယ်သွားသွား ပတ်စ်ပို့ မလိုတဲ့ ဗြိတိန် ဘုရင်မ
တစ်ခြမ်းကို ဂျာမနီပိုင်၊ တစ်ခြမ်းကို နယ်သာလန်ပိုင်...
ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့်ဖြူ လာရတာလဲ?မဖြူ အောင် ဘယ်လိုလုပ...
မှန်ကန်တဲ့အမြင် ရှိတဲ့သူဟာ အင်အားကြီးတဲ့သူ
စိတ်ကျရောဂါ တိုက်ထုတ်နည်း ၁၀ နည်း
သင့်မိဘတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် မိမိကိုယ...
“အောင်မြင်တဲ့သူနဲ့ကျရှုံးတဲ့သူရဲ့ ကွာခြားချက် "
မပေါင်းသင်းအပ်သော ဂဏန်းနဲ့တူတဲ့ လူသုံးယောက်
အဲကွန်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုး
Hard Skills နဲ. Soft Skills !!!
ကမ္ဘာ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးနှင့် ကမ္ဘာ့ မပျော်ရွှင်ဆုံး နို...
ပြိုင်ရတာ မောတယ် ?
နွေရာသီအတွက် အလှအပ လျှို့ဝှက်ချက်
ဖင်လန် နိုင်ငံမှာ ကလေးတွေကို စာသင်ရန် ဘာသာရပ်များ ...
ကျေးရွာ ၁၀၀၀ ခန့်ကို ရေရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးသော ...
ဂုဏ်သတင်းမထိခိုက်ချင်လို့ ညစ်ညမ်း ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ...
ဂျူး၏ ၀တ္ထုစာအုပ်များ (၅၉ အုပ်)
USB ကောက်တွေ့တိုင်း လွယ်တကူ ကွန်ပြူတာထဲ မထိုးသင့်တ...
ကော်စတာရီကာမှာ သဘာဝအလျောက် စွမ်းအင်ဖြင့် လျှပ်စစ်ေ...
စိတ်ထိခိုက်ရတဲ့ လီကွမ်ယု စကားများ -
ဖုန်း Interview ဖြေနည်း !!!
နေ့ခင်းနေ့ဘက် ၄၅ မိနစ်တာ အိပ်စက်ခြင်းက မှတ်ဥာဏ်အတွ...
Interview ကို Dinner မှာပြုလုပ်ခဲ့ရင် !!!
မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာလို့ရမယ့် ဝဘ်ဆိုဒ်တွေ
ရေသောက်နည်းလျှင် ဥာဏ်ရည် နိမ့်ကျစေ
လူအများစု လွဲမှားစွာ လက်ခံထားကြတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့...
သင့်အား မျက်ကန်းတစ်ယောက်ဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ အလှအပခေ...
စိတ်ထဲ ဒါတွေခံစားနေရပြီဆိုရင် သင့်ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွ...
အချစ်ရေး အဆုံးထိ ခိုင်မြဲမှု ရှိမလားဆိုတာ ခန့်မှန်း...
အရက်နဲ့ တွဲဖက် မစားသင့်တဲ့ စားစရာများ
သနားစရာကောင်းတဲ့ မိသားစုမှ ဂုဏ်ယူဖွယ် သားငယ်လေးအြေ...
ဒီနေ့အတွက်တော့ " ယောက္ခမနှင့် ချွေးမ "
အသက် ၂၅ နှစ်မတိုင်မီ လက်ထပ်သင့်သော အကြောင်းရင်း ၇ ...
အသီးအရွက်သမားတွေ ဘာ့ကြောင့် အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ကြတ...
ဘယ်သူက စမှားတာလဲ (ဟာသ)
တေးသံရှင် ဆုန်သင်းပါရ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း